Divide SKU NO.2640-2642 ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းနှင့်အတူတရုတ် Bakeware | SJZ JINXUAN
ခြွင်းချက်မီးဖိုချောင်-to-စားပွဲတင်ဘက်စုံ A သုံးပြုနိုင်ဖုတ်, အစေခံ, စတိုးဆိုင်, နှင့်အတူတူပင် bakeware အားလုံးကို reheat ။ အဆိုပါဖန်မုန့်ဖုတ်ဟင်းလျာများကလွယ်ကူအကြာတွင်များအတွက်ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပလပ်စတစ်ရှေ့ဆက်အချိန်နှင့်စတိုးဆိုင်၏အစားအစာများချက်ပြုတ်ဖို့ပါစေ။ လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံးယဉ်ဝတ်ပြုမှုအတွက်မဆိုစားပွဲ setting ကိုမှမီးဖိုကနေလှလှပပအဆိုပါ bakeware အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်စားကြွင်းစားကျန်ညစ်ပတ်မျိုးစုံဟင်းလျာများမှညဉ့်-မလိုအပ်၏အဆုံးမှာညာဘက်ကျောရေခဲသေတ္တာထဲမှာသွားနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက် ကျေးဇူးပြု. : မီးဖိုမှရေခဲသေတ္တာထဲကနေတိုက်ရိုက်ဖန် bakeware မရွှေ့နှင့်။ ကြစို့ ...
ခြွင်းချက်မီးဖိုချောင်-to-စားပွဲတင်ဘက်စုံ A သုံးပြုနိုင်
မုန့်ဖုတ်, စတိုးဆိုင်အစေခံများနှင့်အတူတူပင် bakeware အားလုံးကို reheat ။ အဆိုပါဖန်မုန့်ဖုတ်ဟင်းလျာများကလွယ်ကူအကြာတွင်များအတွက်ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပလပ်စတစ်ရှေ့ဆက်အချိန်နှင့်စတိုးဆိုင်၏အစားအစာများချက်ပြုတ်ဖို့ပါစေ။ လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံးယဉ်ဝတ်ပြုမှုအတွက်မဆိုစားပွဲ setting ကိုမှမီးဖိုကနေလှလှပပအဆိုပါ bakeware အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်စားကြွင်းစားကျန်ညစ်ပတ်မျိုးစုံဟင်းလျာများမှညဉ့်-မလိုအပ်၏အဆုံးမှာညာဘက်ကျောရေခဲသေတ္တာထဲမှာသွားနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ကျေးဇူးပြု. : မီးဖိုမှရေခဲသေတ္တာထဲကနေတိုက်ရိုက်ဖန် bakeware မရွှေ့နှင့်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မီးဖိုတဖို၌ reheating မတိုင်မီစားနပ်ရိက္ခာနွေးထွေးကြကုန်အံ့။ ပူဖန် bakeware ဟင်းလျာများကိုင်တွယ်တဲ့အခါ potholder သုံးစွဲဖို့သေချာပါစေ။
အဆိုပါဖန်မုန့်ဖုတ်ဟင်းလျာများသမားရိုးကျမီးဖိုတဖို၌ဒါမှမဟုတ်မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုတဖို၌အစာအာဟာရဖုတ်သို့မဟုတ် reheat ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မစိုက်, ဖုတ်နောက်ဆုံးရလာဒ်များကျော်ကဆက်ပြောသည်ထိန်းချုပ်မှုပေးသည့်အခါအစားအစာများ၏တိုးတက်မှုမှာ peaking ဘို့ခွင့်ပြုဖန်နှစ်ဖက်မှတဆင့်ကြည့်ရှုပါ။
ဤရွေ့ကား bakeware အပူချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အပူချိန်အပြောင်းအလဲများနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါ shattering ရန်ထို့ကြောင့်လျော့နည်းကျရောက်နေတဲ့များအတွက် borosilicate ဖန်-စံပြနှင့်ဖွဲ့နေကြသည်။
မှတ်ချက် ကျေးဇူးပြု. : Glass ကို bakeware တစ်ကင်အောက်မှာတစ်ဦး stovetop အပေါ်, ဒါမှမဟုတ်အရက်သို့မဟုတ်အဆင်သင့်အပူ burners တွေကနှင့်အတူတိုက်ရိုက်အပူအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုမရသင့်တယ်။
ဤရွေ့ကား Bakeware Divide အတူ effeciently အစားအစာခွဲခြားသည်အခြားအနံ့စှနျးကိုရှောင်ရှား, ဒါကြောင့်သင်မူရင်းလတ်ဆတ်တဲ့အစားအစာကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။
ယခင်: ရင်ပြင် Shape အတွင်းရှိ Bakeware
နောက်တစ်ခု: ဘဲဥပုံ Shape SKU NO.277-278-279-2710-2711 အတွက် casserole
Borosilicate Glass ကို Bakeware
glass ကို Baker
glass ကို Bakeware
လက်ကိုင် SKU NO.261 နှင့်အတူ Oblong Shape အတွင်းရှိ Bakeware ...
က Round Shape အတွင်းရှိ Bakeware
လက်ကိုင် SKU NO.226H နှင့်အတူဘဲဥပုံ Shape အတွင်းရှိ Bakeware -...
Rectangular Shape SKU NO.2612-2617 အတွက် Bakeware
Divide SKU NO.2643 နှင့်အတူ [Copy ကူး] Bakeware
Borosilicate Glass Bottle With Silicon Sleeve, Borosilicate Glass Bottle With Bamboo Lid, Borosilicate Glass ကိုရှလကာ & ရေနံ Bottle သ, Borosilicate Glass ကို Bottle သ, Glass Cups With Silicone Sleeve, Glass Bottle With Colorful Silicon Coating,